Qiso: Toobada Iyo Dhimashada | Hubaal Media
Guriga MAQAAL Qiso: Toobada Iyo Dhimashada
Wixii wacnaa ee aan akhriyay Dr Jaasim. Q/1aad Tabintii: Axmed Cali Kaahin.
Nin ka mida dadkii reer Basra ugu caansanaa badnaa, baa soo iibsaday gabdh adeegto ah lana yidhaa Xusni, oo ah kuwa heesaha iyo maaweelada ku madadaaliya madaxda una shu’shuba sharaabka iyo maandooriyaha khamriga taasi oo qurux iyo ciyaar wanaag lagu yaqaanay. Wakhti wakhtiyada kamida wuxuu usoo safray xagaa iyo magaaldiisii Basra isagoo soo raacay doon kooxdiisiina la socdaan.
Wax safarkii lagu sii jiraba gabalkii baa dumay oo habeen gudcur bay noqotay, dabaylihiina way soo dhaceen, sidoodii caadada u ahayd waxay qayb sadeen maandooriyihii xaaraantaa ahaa rakaabkii doonta saarnaa. Markaas ayuu ku yidhi gabadhii dhaantada u qaalbilsanayd na maqashii maa’dii iyo madaaaladii aan ku mirqaami jirnay iyo heesihii macaanaa, kuna ladhnaayeen durbaankii iyo darbuugadii sideedii bay bilawday heesihii iyo qoob ka ciyaarkii.
Meel koone ah waxa fadhiyo oo gidaarka ku naban nin dhalinyaro ah oo quraan akhrisanaya kana dheeraanaya fadhiga xun ee Allaaah Subxaanah lagu caasinaayo, waxa u soo dhawaaday ninkii gabadha lahaa…. Isagoo sirkhaansan buu ku yidhi ma maqashay wali wax taa ka wanaagsan isagoo heesaha ay qaadayso gabadhu jeeda? Wuxuu ugu jawaabay haa.
Markaas buu dib u jeleecay gabadhii kuna yidhi jooji, wiilkiina wuxuu ku yidhi keen waxaad hayso, oo na maqashii …. Wiilkii baa cod macaan wuxuu ku akhriyay aayadaha.
… “waxaad ku tidhaahdaa maalka aduunyo waa wax yar, aakhirana waxaa leh ka ilaahay ka baqa iyadoon wax’ba la iska dulmiyayn. Meelkasta oo aad joogtaana geeridu waydin haleeli, xataa haddaad qasriyo la’adkeeyay ku sugan tihiin”.
Aayadii baa qalbigii ninkii ku dhibicday, waanu miyir doorsoomay waxaanu ku tuuray koobkii khamriga ahaa biyaha. Waxaanu yidhi “waxaan qirayaa in intani ka khayr badan tahay taan dhagaysanaayay, iigu celi aayad kale.
“ ku dhe waa xaq’- xaga rabbi ka ahaaday, ee kiinii doonaa ha rumeeyo kii kalena ha beeniyo waxaanu u diyaarinay kuwa dulmi falayaasha ah naar koobaysa goobtiina”…….wuu argagaxay,… wuxuu ku daadiyay dhamaan khamrigii bada, wuxuuna jajabiyay cuudkii ama kamankii, gabadhiina xorbaa tahay oo waan ku xoreeyay. Wuxuu galay koone doonta kamida waxaanu bilaabay in uu ku celeliyo tooba yaarabi Allow waan kuusoo noqday ee iga aqbal.
Markii uu arkay wiilkii sida uu qalbigii ninkii Allaah u jilciyay…. Una cabsaday jidhkiisiina u khusuucay, wuxuuna ku akhriyay aayad rajo galin ah.
“Adoomadayda Aalle rumeeyaya ee ee naftooda ka gaabiyayaw ha ka quusanina naxariistayda, “Allaah dambiyada oo dhan wuu dhaafaa waana mid dambi dhaaf badan” wuxuu bilaabay in uu gariiro oo uu yidhaahdo “ waxaan qirayaa in Allaah dambi dhaafe naxariista yahay” ka dib wuu neefsaday neefsasho naftiiba ka raacday” sidaas-buuna ku geeriyooday ninkii.
Haddaba cidkasta oo xadkaha jiidha oo xadgudubta, ama gaabisa ha ku bushaaraysato aayada “haddii aad ka joogsataan waa la idiin dhaafi wixii hore”
Article horeDawladda Kenya Oo Cashuur Kusoo Rogaysa Dadka Isticmaala Baraha Bulshada Ee Ku Faana Nolosha Raaxada Leh
Article soo socdaShirka Wada-tashiga Siyaasada Qaran ee xuquuqal Aadamaha Somaliland oo Hargeysa ka Furmay